dzidzo | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Budget smartphone Nokia 2.3 yakawana kuzvitonga kuzosvika pamazuva e2
HMD Global yazivisa bhajeti nyowani foni muEjipitori. Kunyange vazhinji vaitarisira kuvhurwa kweNokia 8.2, chiitiko chaicho chaiitirwa kuvhura Nokia 2.3. Iyi gadget yekupinda-chikamu ...
Mibvunzo yakatenderedza Hondo yekutengeserana yeChina-US, uko Huawei iri pakati pekupokana, dzimwe nguva ine mamiriro anonakidza. Russia yakafunga kuti maChinese ndiye achave mutengesi mukuru wezvivakwa zve5G Rashiya ...
Kutenda kweSunni ndiyo imwe yeyavo nzira huru dzeIslam. Kutenda kwezuva: kurondedzerwa, maitiro uye chokwadi chinonakidza
Pamwe hapana chitendero chimwe munhoroondo yaro chakadzivirira kupatsanurwa kwakatungamira mukuumbwa kwemaitiro matsva mukati merimwe dzidziso. Islam haisi iyo yakasara: mazuva ano kune hafu yegumi nemaviri ayo makuru ...
Old Mutendi Wemuchinjiko: maitiro
Muchinjikwa weChechi yeChechi yeChechi yeChechi yeChechi ine chimiro chakasiyana zvishoma kubva pamuchinjikwa wakanangana-mana wakapararira munguva yedu. Iyo ine maviri crosshairs pakona yemakumi mapfumbamwe emadhigirii, apo iyo yepamusoro crossbar inoreva hwendefa rakanamatira pamusoro paKristu ...
Buddhism: zororo, tsika, tsika
Nhoroondo yeBuddhism ine nguva yakareba yenguva, pamwe nevateveri vazhinji nhasi. Kutanga kweichi chitendero kune yayo ngano yerudo, iyo inotsanangurwa muchinyorwa chino. Zvakare mu…
Chii chinamato pane chiratidzo cheMutumwa mukuru Michael
Mifananidzo yeMutumwa mukuru Mikaeri inogona kuonekwa mumabhuruku makuru, mumachechi madiki ematunhu uye mudzimba dzevatendi. Sei gamba remubhaibheri iri richidiwa nekuremekedzwa nemaKristu? Iye ndiani? Maererano ne ...
Icelandic runes yeiyo chena uye dema akateedzana
Icelandic runes zviratidzo zvinoshandiswa zvemashiripiti, uye dzimwe nguva muchimiro che tattoo. Ivo vakakamurwa kuita mhando mbiri: chena uye nhema. Zviri nyore kufungidzira kuti chena i ...
Mabasa emaguta. Kugadziriswa kwemaguta nebasa: mienzaniso
Guta harimuke roga. Kubva panguva yekuzvarwa kwayo, yakabatana zvisingaite nechero mhando yechiitiko, rinova basa rayo. Chokwadi kubva Pfuura Nhoroondo-yemazana emakore nhoroondo yevanhu inopupurira ...
Mwari Amon - mutongi weEjipitori
Uyu aive mwari wekare weIjipita asina kujairika. Zita rake rinoshandurwa se "rakavanzwa" kana "chakavanzika", uye ukuwo zuva, chimiro chaaive, chaipenya pamusoro pemisoro yevaiyemura, chinowanikwa kune ese maziso. Him…
Socionics i ... Socionics: tafura yehukama
Nguva refu yapfuura izwi rakadai sowe socionics rakaonekwa. Iyi haisi sainzi, asi yakasarudzika mhando yemhando, pamwe nehukama hunokura pakati pavo. Yakatangwa mumakumi manomwe ezana ramakore rapfuura ...
Mauto charter uye zvikamu zvaro
Bumbiro remasoja emauto iseti yemitemo, zvirevo nemitemo inotonga vanhu vanoitwa zvekumanikidzirwa kana kuita chibvumirano muchiuto. Iyo yakarongedzwa uye yakakamurwa kuita zvikamu uye ...
Runic rudo runopopota. Iko kusanganiswa kwe runes uye zvadzinoreva, mhedzisiro yedzidziso dzerudo
Mashiripiti agara achitora chikamu chakakosha chehupenyu hwemunhu, akamubatsira mumamiriro ezvinhu akaoma uye anga ari rutsigiro rwakavimbika. Madzibaba edu aigara achitendeukira kumasimba epamusoro kuti abatsirwe, uye achiripo nanhasi ...
Masango ari anti-radiation. Zvinoungana uye zvekuzvidzivirira nazvo panjodzi munjodzi
Radiation kuongorora kunoitwa kumabhizimusi mabhizinesi uye magetsi enyukireya hakuregi mukana wenjodzi. Naizvozvo, munhu wese anofanirwa kuziva nzira yekudzivirira hupenyu hwavo uye hutano mune ino mamiriro. Chinyorwa chedu chine ...
Dudziro yeDota: mutumwa anorota nezvei. Zvinoreva uye kududzirwa kwechiroto
Nei ngirozi ichirota? Mufananidzo wakareruka wemutumwa wekudenga unonyanya kudzikamisa vanhu. Vachiona kerubhi rakanaka muzviroto zvavo, vanomuka vakadzikama ndokuzorora. Zvisinei, hope dzousiku dzinovimbisei, ...
Maofficial mapurisa emapurisa. Mirayiridzo yekurongedza zviitwa zvevasiri-vashandi vemapurisa
Musi waApril 2014, 44, Mutungamiriri akabvumidza Mutemo Nha. Ichi chiito chinowanzoitika chinogadzirisa maitiro uye mamiriro ekutora chikamu kwevanhu mukuona runyararo rweveruzhinji. Mutemo wakanangana nekugadzira nzira yakajeka yekukwezva vagari ...
Chii chinorehwa nezvezita rekuti Dmitry kumwana, pesvedzero yavo pane kupukunyuka kwemunhu
Zvinotendwa kuti njodzi yemunhu inokanganiswa kwete chete nezuva rekuzvarwa kwake, asiwo nechiratidzo chezodhiac chaakaberekerwa pasi pacho, pamwe nezita raakatumidzwa naro. Zvese izvi mu ...
Chikamu chepfungwa chekuziva - tsananguro, maficha uye zvinonakidza chokwadi
Muchikamu chino, isu tichaona kuti chii chikamu chepfungwa (nyika yepfungwa). Mune esoteric (zvemashiripiti) dzidziso (New Age, Theosophy, Hermeticism) inonzi vhoriyamu (dura) rezvisikwa (zvakasikwa), rakagadzirwa kubva pamifungo, pfungwa uye pfungwa ...
Chii icho 1970 gore ichataura nezve? Ndeupi mhuka yaanomiririra mu Horopopopi yekumabvazuva?
Kuti uzvizive zviri nani, munhu anogona kuenda kunzvimbo dzakasiyana. Imwe yacho ndeye Chinese horoscope, iyo inogona kutaura zvakawanda nezve munhu. Ichi chinyorwa chichava chinobatsira kune avo ...
Kutamira kuItari kubva kuRussia: mamiriro, nzira
Kuenda kune imwe nyika kuIceland kuri kure nenzvimbo inonyanya kuzivikanwa. Asi zvakanyanya kuwedzera muRussia. Chero zvazvingaitika, vagari vazhinji vanofarira maitiro aya. Kunyanya, nekuti ...
peji 1 peji 2 ... peji 2 Next Page
Mibvunzo ye49 mu database yakagadzirwa mu 1,434 masekondi.